Xaafad — Raymond Dehn for Minneapolis
Waxaan oo ordayaa inaan noqodo Maayar sababtoo ah kala sooc la'aanta oo dacwada dadka magaladdan ko nool baan raba inaan ka takhalooso. Sidde wax oo dacaan hada ma shaqeenayso.
Quluubtayadu waxay u kobceen si ay u arkaan caddaalad darro, laakiin nidaamkeena hadda maaha mid oo dadka daryeela. Siyaasadaha kala qaybinta Minneapolis waxay sii wadaan farqi iyo sinaan la'aan. Haddii aynaan si firfircoon u jebin nidaamyada cadawtinimada cad, waxaan ku talajirnaa inaan ilaalino.
Aragtidayadu waxay kor u qaadaysaa kuwa caadiyan ka tagay geeddi-socodka, kuwaas oo shaqeeya shaqooyin badan oo waqti buuxa ah si ay u taageeraan qoyskooda, kiraystayaasha laga xoreeyo xaafaddooda, kuwa dareemaya inay ka baqayaan in ay joogaan saraakiil ku dhaartey inay ilaaliyaan, iyo dhammaan kuwa haysta saamiga caafimaadka ee deegaanka.